Editor Ee Doorashada September 23,2019
Sida loo koro geedaha basasha Ural
Basasha waa mid ka mid ah khudradda ugu badan ee loo isticmaalo karinta. Waxyaabo muhiim ah oo ka mid ah beerashada guuleysata ee dalagga this ee shuruudaha beeraha khatarta ah waa xulashada noocyo ku haboon iyo daryeel dheeraad ah u. Noocyada ugu fiican ee Ural ah Noocyo ugu wanaagsan ee geedo basasha ee Ural waa: Arzamas-kilovatitsy koraan min 40 ilaa 80 g, waxay leeyihiin qaab aad u xaraarad leh, midabo huruud ah ee qolfahaaga dibadda, gudaha waa caddaan.
Sida loo diyaariyo oo lagu badbaadiyo basasha cagaaran xilliga jiilaalka
Basal cusub ayaa hodan ku ah walxaha caafimaadka leh. Marka la qaboojiyey, foomka la qalajiyey, waxay badbaadisaa nafaqooyinka yaryar, laakiin ugu yaraan waxay hagaajin kartaa dhadhanka cuntada. Sidaa darteed, waxay macno u tahay diyaarinta cagaarka basasha jiilaalka. Hoos waxaan ku siin karnaa cuntada asaasiga ah ee basasha cagaaran. Diyaarinta basasha cagaaran oo lagu keydiyo Si aad u ilaaliso cagaarka wakhti dheer oo aanad ku dhicin, waxaa muhiim ah inaad u diyaariso kaydinta.
Qeexida noocyo kala duwan
Shallots waa wakiil cad oo ka mid ah qoyska basasha. Si ka duwan sida caadiga ah basasha, laakiin gudaha, sida toon, waxay ka kooban tahay xaleef shakhsi. Looga helay bacrimin ah ee loo yaqaan 'precocity' iyo awoodda ay u isticmaalaan karinta sannadka oo dhan: guga iyo xagaaga waxay ururiyaan caleemo casri ah, caleemo cagaaran, iyo cimilada qabow waxay isticmaalaan basasha.
Xeerarka beeritaanka iyo koritaanka haramaha baaldiga
Shallots waa wakiilka ugu faa'iido badan ee basasha, sidaas ma aha la yaab leh in dalagga this si aad u caan ah ee guriga iyo ganacsiga qudaarta sii kordhaya. Badanaa, xididada waxaa lagu koray baalasha si ay u helaan cagaarka fitamiinka. Shallot waxay leedahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah oo ku saabsan basasha: riwaayadda, dhalidda sare, iska caabida qabowga iyo caabbinta barafka, taas oo kuu ogolaaneysa inaad hesho waxtarro badan oo hore.
Goobidda iyo daryeelka ee allium
Waxaad la yaabi doontaa dad yar adigoo ku beeraya basal caadi ah oo ku yaala dhul, laakiin waxa ku saabsan basal aan caadi aheyn oo uraya udgoon, waxa uu ubaxsan yahay midab khafiif ah, oo dhadhankiisa dhadhankiisu waa dhadhan yahay? Qormo qurux badan oo loo yaqaan "allium", iyo waliba dhammaanba ku saabsan beeritaanka iyo daryeesha isaga oo ku jira berrin furan - taasi waa mawduuca qodobkan. Tilmaanta iyo noocyada kala duwan Warshad caan ah ayaa muddo dheer caan ku ahayd, waxaa loo isticmaalaa diyaarinta ubaxyada, jardiinooyinka, dhirta, xuduudaha iyo dhagaxyada.
Qallajis ah oo basal ah oo jiil ah Dzhusay: xeerarka beeritaanka iyo daryeelka
Warshad Cagaaran Dzhusay More bannaanka u yaqaan sida kareem oo la jarjarey oo la mid ah magaca. Aan ogaano halka uu magacan ka yimid. Qeexida noocyada kala duwan Iskuday, qaababka ka dhacaya jizuusyada cawska Jusai way ka duwan yihiin noocyada caanaha nalalka caanka ah ee nala yaqaan annaga naqaano inaanay aad u caddayn sababta aan u tixgelineyno inay basasha yihiin.
Sida loo koro basal fiican oo qoyska ah
Bannaanka u badani waxay isku dayaan inayan beeran nooca baska, sida qoys, sababtoo ah waxay ka baqayaan in ay helaan goosashada basasha yar yar. Dhammaantoodna ma yaqaaniin ilaa ay dhammaato sida ay u koraan. Haddii aan arrintan ku soo aragnay dhibic culus, aragtida goosashada nalalka culeyskeedu ka badan yahay 100 g wuxuu mid waliba noqon doonaa xaqiiqo sanadle ah.
Basasha Goose: faa'iidooyinka iyo waxyeelada caafimaadka aadanaha
Cagaar cagaaran oo yar, ilaa 35 cm, cawska leh sunta jilicsan ee jilicsan ayaa si dhib leh u soo jiitay fiiro gaar ah, haddii aan loo eegin guud ahaan sifooyinka faa'iidada leh ee ka kooban. Waxaan ka hadleynaa Geydzhi, ama basasha goose, sida ay dadku ugu yeeraan. Maanta waxaan ogaanaynaa waxa uu dhirta u yahay mid aad u faa'iido leh iyo sida loo isticmaalo daawada kale.
Xeerarka lagu waraabiyo basasha berrinka bannaan
Ma aha qarsoodi in fursadaha waraabinta basasha ay ku kala duwan yihiin, taas oo ku xidhan ujeedada taas oo dalagga beeray. Sababtan darteed waa in maqaalkani aanu ka wada hadli doonin kaliya qawaaniinta caadiga ah ee waraabinta basasha ee bannaanka u furan, laakiin sidoo kale waxoogaa murugo leh oo la xidhiidha isbeddelka cimilada iyo isbeddelka heerkulka.
Baska basasha: maxay tahay sababaha waxbarashada iyo tirtirida
Bannaanka u badan ayaa la kulmay xaqiiqda ah in ay dareemayaan formation of fallaadho on qaansada. Maqaalkeena waxaan isku dayi doonaa inaan fahanno waxa caleemahaasi yihiin iyo waxa la sameeyo si aan qaanso u gooyin. Basboorka Caanaha Foosto waa foori-saarid, meeshii laga rabo in si fiican loo soo saaro abuurka.
Sidee casaan basal u leh caafimaadka?
On faa'iidooyinka basasha, gaar ahaan, awood u leh inuu hagaajiyo dheefshiidka, xoojinta difaac, kordhiyo cunto xumo, waa la yaqaan dhammaan. Wax badan oo yar - ku saabsan waxyeelladiisa. Maqaalka waxaan ka hadli doonaa sifooyinka faa'iidada leh iyo khilaafaadka si aad u isticmaashid basasha cas ama casaan. Waa kala duwanaanta noocaas ah oo wanaagsan marka loo isticmaalo cusub, sababtoo ah waxay leedahay macaan, dhadhan badan oo casiir leh, mana jirto dhadhan guban iyo caraf cad.
Basasha "Sturon": qaababka noocyo soo kordhaya
Ka mid ah noocyada kala duwan ee noocyo kala duwan ee basasha "Sturon" ayaa ku leh meel gaar ah sababtoo ah dhadhankiisa, awood u leh in lagu kaydiyo muddo dheer iyo farsamooyinka fudud ee beerista. Caan ka mid ah Beelahaas ayaa kordha sanad walba, taas oo ah sababaha kor u kaca ee dabeecadaha kala duwan.
Sida loo koro basasha Yalta laga bilaabo abuurka
Ku dhowaad dhammaan dalxiisayaasha soo booqday Crimean, ugu yaraan hal mar laakiin waxay guriga keeneen qaanso caan ah Yalta. Qaar badan oo xitaa isku dayeen in ay koraan khudradda macaan ee beertooda, laakiin waxay ku guuldareysteen in ay gaaraan dhadhanka dabeecadda ah ee ay ku leedahay baska Crimean. Maanta waxaan fiirin doonaa sababta ay ugu suura galsan tahay guriga in ay gaaraan dhadhanka ugu fiican ee la yiraahdo baska jaliska Yalta, sida loo koro abuurka ee hareeraha dhexe, si loo keeno dalagga soo go'ay sida ugu dhow ee suurtogalka ah khudradda caanka ah.
Basasha goosashada jiilaalka: cuntada ugu fiican
Basasha - warshad qashin ah oo la koray oo la kariyey dhammaan aduunka. Waxaa ku jira fiitamiin iyo nafaqooyin badan. Xilliga diiran waxaa loo isticmaalaa diyaarinta cuntooyinka kala duwan. Waxaa intaa dheer, waxaa jira cuntooyin badan oo kuu oggolaanaya inaad gurigaaga u diyaariso jiilaalka, halka ay ku hayaan sifooyinka wanaagsan.
Qodobbada waxtarka leh ee buluuga
Leek waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan oo si ballaaran loo qaybiyey, oo ku saabsan sifooyinka mucjisada ah ee qof kastaa ogyahay. Warshadani waxa ay u badantahay in ay ka timaaddo cuntada dadka ka shaqeeya caafimaadka. Waxyaabaha ay ka kooban tahay (fiitamiinada iyo iskudhafka, kalooriyada content) Leek waa mid aad u hodan nafaqooyinka.
Basasha la jarjaray: beerashada, hantida faa'iido leh
Basasha waxaa lagu beeray beeraley badan, sababtoo ah xaqiiqda ah in ay tahay mid aan qabyo ahayn beerashada iyo wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh. Waxaa lagu daraa saladh, suxuuno kala duwan oo la cuno oo kaliya sida kibis. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah dhirta, iyo in this article waxaan ka fiirsan doonaa sida aragti aan caadi ahayn sida Qaanso badan oo qoynta.
Basasha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan, waxaanu u isticmaalnaa maalin kasta, maadaama ay ka mid tahay cuntooyinka caadiga ah ee cuntada. Tani waa sabab, ugu horrayn, xaqiiqda ah in ay aad u faa'iido u leedahay jirkeena. Laakiin noocyada isticmaalka badani way ka ballaaran tahay inta aan ku fikirayno, oo aan dhaafno karinta.
Dayrta beerashada dayrta ee xilliga qaboobaha: Talooyinka ugu fiican ee Fiisooyinka khibrada leh
Basasha - geedo digaag ah. Nooca ugu caansan waa basasha. Beerashada ayaa keentay xaqiiqda ah in hadda ay tahay gabi ahaanba warshad biennial ah. Basasha ayaa loo adeegsadaa cuntada, iyo dalagga si ay u noqdaan sanadka oo dhan, waa in la beeray jiilaalka. Tan iyo dhirta ay leeyihiin in ay u maraan badan oo badan maalmood qabow, beerto this leedahay sifooyin gaar ah.
Goorta iyo sida loo abuuro basasha ka hor xilliga qaboobaha ee Ukraine
Xilligii hore ee beeraha, beeraley badan ayaa baratey noocyo kala duwan oo ah dalagyada khudradda ka hor xilliga qaboobaha. Mid ka mid ah dalagyadaas waa basasha. Basasha, beeray dayrta goor dambe, waxay bixisaa goosashada wanaagsan, xitaa marka kiiska marka guga uu qalalan yahay. Markuu nuugo qoyaanka jiilaalka, dhalatada basasha ee isku midka ah, iyo ka hor intaan maalmihii qalalan iman, waxay leeyihiin waqti ay ku hormariyaan nidaamka xididka, taas oo ah dammaanad qaadashada goosashada.
Talooyinka guud ee koraya iyo basasha dilka ah ee caan
Aad ayay u adag tahay in la kulmo khudradda, halkaas oo cagaarka ay ahayd qaybta ugu muhiimsan, laakiin waxay siinaysaa suxuunta dhadhan gaar ah iyo caraf udgoon. Iyo sababta oo ah, cagaarka ayaa koray xitaa dalka, xitaa balakoonka ama windowsill ee guri dabaq ah. Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa basasha dilka ah, gaar ahaan, isweydaarsiga beeraha.
Meelaha baranbaradu ka yimaadaan aqal guri ama guri, miyay suurtogal tahay in laga hortago muuqaalkooda iyo sida loola dagaalamo?
Farshaxanka Akhalteke: Cunugga dhaqameed ee ugu da'da weyn
Maxay tahay wax la mid ah Lenkoran Acacia ama Albizia Silk?
Dhibaatada adag (scientifically-tsimitsifuga) weli caan ah. Geedkan waxaa si fiican looga helay sawirada dacha, halkaas oo mudo dheer oo uu ku faraxsan yahay isha oo leh "burushyo waaweyn" ee foorishooyinka. Dib-u-eegista, waxaanu eegi doonaa sida noocyada ugu muhiimsan ay yihiin kuwo cajiib leh iyo noocyo badan oo ah kuwa ugu baahida badan. Dhererka American wuxuu u dhexeeyaa 0.9 ilaa 1.5 m. Read More
Guryaha dawooyinka iyo codsiga raspberry